Myanmar: Noafahana ihany i Suu Kyi · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Oktobra 2018 14:34 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, Nederlands, Español, 繁體中文, 简体中文, srpski, Português, 한국어, বাংলা, Swahili, English
Nogadraina nandritra ny 15 taona tao anatin'ny 21 taona izy, kanefa afaka ihany ankehitriny. Ilay mpanohana ny demaokrasia Birmana malaza sady mpitarika ny mpanohitra Aung San Suu Kyi dia navotsotry ny miaramila tohanan'ny governemanta ao Myanmar ny tolakandron'ny Asabotsy, herinandro taorian'ny fifidianana manerana ny firenena izay nandresen'ny kandida mpanohana ny fitondrana.
Afaka nitatitra ny minitra vitsy voalohany tamin'ny famotsorana azy ny The Democratic Voice of Burma . Ity lahatsary ity dia mampiseho an'i Suu Kyi manofahofa tanana amin'ireo mpanohana azy eo anoloan'ny trano fonenany eo amoron'ny farihy.
NY FAMOTSORANA AN'I AUNG SAN SUU KYI tao amin'ny DVBTV English amin'ny Vimeo.
Niparitaka ny vaovao ny Alakamisy fa ho afahana i Suu Kyi amin'ity faran'ny herinandro ity amin'ny fiafaran'ny saziny tamin'ny fihazonana azy tsy hivoaka ny an-trano. Notaterina fa nanao sonia ilay taratasy famotsorana azy izy tamin'ny manodidina ny 12 ora atoandro tamin'io andro io. Na dia ny mpikambana ao amin'ny Ligy Nasionaly ho an'ny Demaokrasia (NLD), ilay antokon'i Suu Kyi, aza dia nanomboka nanadio ny biraon'ny foibe ho fanomanana ny famotsorana azy. Nisy olona miisa 500 na mihoatra nivory teo anoloan'ny biraon'ny NLD tany Yangon, izay niandry ny famotsorana an'i “Nenitoa Su” ny zoma. Nivaky hoe “ Androany no Andro Famotsorana Azy ” ny sora-baventy teo anoloan'ny foibe.
Nisalasalana ihany anefa ny fanafahana an'i Suu Kyi raha nanda ny fangatahany farany manohitra ny fanagadrana azy tao an-tranony ny Zoma ny fitsarana ambony Birmana, ka nahatonga ny vahoaka hanana ahiahy momba ny famotsorana azy na tsia.
Nandritra izany fotoana izany, voalaza fa nahazo visa hitsidika tany Myanmar i Kim Aris, zanakalahin'i Aung San Su Kyi.
Faly izao tontolo izao rehefa nafahana tamin'ny fanagadrana an-trano i Suu Kyi, izay nahazo ny Loka Nobel ho an'ny Fandriampahalemana . Nampiasa ny tenirohy #aungsansuuky ny mpisera Twitter rehefa nanatevin-daharana ny resadresaka manerantany tamin'ny fankalazana ny fanafahana an'i Suu Kyi.